Premier League Oo Shaaciyey Tirada Ciyaaryahanadda Uu Xanuunka - Axadle | Wararka Africa
Maamulka Premier League ayaa shaaciyey kiiska xanuunka Korona Fayraska ee toddobaadkan laga diiwaangeliyey horyaalka, taas oo muujisay sare u kac aad u sarreeya.
War-saxaafadeed uu Premier League soo saaray xalay ayaa waxa uu ku sheegay in 1,207 ciyaartoy iyo shaqaale ah ay ka baadheen xanuunka usbuucii ugu dambeeyey ee kasoo bilowday November 9 illaa November 15, isla markaana ay soo baxday natiijo werwer leh oo muujinaysa inay sare u kaceen tirada ciyaartoyda uu xanuunkani ku dhacay.
Natiijada baadhitaannadii toddobaadkii hore ayaa ahayd in 10 ciyaartoy iyo shaqaale iskugu jiray xanuunkan laga helay, balse usbuucan ugu dambeeyey ayay tiradaasi si weyn sare ugu kacday, waxaanay gaadhay 16 qof oo ciyaartoy iyo shaqaale ka kooban, balse waxa suurtogal ah in tiradan aan lagu darin ciyaartoydoodii xalay la xaqiijiyey in laga helay.
Xaaladdan werwerka leh oo imanaysa xilli ciyaartooyo badan ay ku maqan yihiin waddamadooda oo ay usoo ciyaarayaan, ayaa waxa la filayaa in maalmaha soo socda baadhitaano intan ka badan la samayn doono, lagana yaabo in kiisasku kasii bataan.
Kiiskii ugu dambeeyey ee laga diiwaangeliyey Premier League ayaa noqday laacibka Arsenal ee Mohamed Elneney oo waddanka Masar ku sugan, halkaana lagu karantiilay.
28 jirkan ayuu wakiilkiisa Alan Nazmy barta twitterka ku xaqiijiyey in xanuunkani uu ku dhacay: “Elneney waxa laga helay Cov19, bogsasho degdeg ah ayaan kuu rajaynayaa.”
Xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah ayaa isaguna ku sugan waddanka Masar iyadoo uu xanuunkani ku dhacay, halka difaaca midig ee Tottenham ee Matt Doherty uu isaguna xanuunkan kasoo qaaday xilli uu waddankiisa Republic of Ireland kala qayb-gelayay kulamada caalamiga ah.